ko thet December 11, 2012 - 3:18 pm Millions of congratulation…..especially to play against local soccer power Thailand team and winning sucharemarkable competition….so much proud of you all…asateam representing Myanmar…Cheers!
Reply ဗမာ December 11, 2012 - 4:01 pm နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းထက် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကို ပိုအားပေးဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်နော်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် ယူ-၁၉ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းခင်ဗျား။ ။
Reply ကောင်းစေချင် December 11, 2012 - 5:23 pm ဂုဏ်ယူပါတယ်၊အရမ်းတော့ဝမ်းမသာသေးဘူး၊ U-19ဆိုတော့။ မြန်မာ U တွေက အသက် မယုံရဘူး။ လက်ရွေးစင်အသင်းဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်ပွဲဝေးနေတဲ့ မြန်မာအသင်းအတွက်တော့သတင်းကောင်းပါပဲ။
Reply Myo Chit Maung December 12, 2012 - 3:16 am I amamale. I wanna suggest that Myanmar male foot ball players should pay attention how woman players play .
Reply pnwara December 15, 2012 - 6:44 pm ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မြန်မာ့ သမီးငယ်တွေ ဆက်လက်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့နေတဲ့